Sheekh Shariif oo xalay gaaray Imaaraadka Carabta iyo Qorshaha Imaaraadka… – STAR FM SOMALIA
Musharax Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay gaaray dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, iyadoo lagu wado in maalinta berri uu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho.
Shariifka ayaa soo gaba gabeynaya ololihii uu dibadda ka waday, waxaana socdaalkiisa lagu tilmaamay inuu yahay kii ugu dambeeyay.
Ilo wareedyo muhiim ayaa sheegaya in Shariifka uu kulamo kula yeelan doono magaalada Dubai Mas’uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta.
Sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu la kulmo Ganacsato Soomaaliyeed ee ku sugan Imaaraadka, si uu taageero dhaqaale uga helo.
Imaaraadka Carabta ayaa markan doonaya in taageeradooda isugu geeyaan Musharax Sheekh Shariif, kaddib markii ay ka laabteen taageeridii Musharax Cumar C/rashiid.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif ayaa horay u degenaa Imaaraadka Carabta, afartii sano ee uu saaxada siyaasada ka maqnaa.
Diiwaan gelinta Musharaxiinta Madaxweynaha oo maanta la soo gaba gabeynayo